Sierra Leone neGuinea: “Kuita Kuti Vazhinji Vave Vakarurama”—Dhan. 12:3. (Chikamu 3) | Bhuku Regore ra2014
Kunetsana Neboka Rinonzi Poro
Kurwisa kwekutanga kwakaitika mumusha waiva pedyo neKoindu maiva neboka revarume vaidzidza Bhaibheri uye vachipinda misangano nguva dzose. Kufanana nevanhurume vakawanda vechiKisi, varume vacho vaiva nhengo dzeboka repachivande rakanyura mune zvemidzimu rinonzi Poro. “Vadzidzi veBhaibheri pavakaramba kuita zvechidhimoni, ishe wePoro akadya marasha,” anodaro James Mensah, mumishinari akadzidza kuGiriyedhi aishumirawo ari muSierra Leone. “Ishe wacho nevatsigiri vake vakarova varume vacho, vakaba zvinhu zvavo, vakapisa misha yavo vakavasunga necheni ndokuvasiya musango kuti vafe nenzara. Mambo wePoro ndiye akakusvudzira nhengo dzacho kuti dziite izvi. Pasinei nokutambudzwa uku vadzidzi veBhaibheri havana kutsuduguka.”
Hama dzemuKoindu padzakamhan’ara nyaya yacho kumapurisa, ishe wePoro, madzisahwira ake, namambo wacho vakasungwa. Vakatongwa ndokushaudhwa zvakasimba, uye mambo wacho akambobviswa pachigaro kwerinenge gore. Kukunda uku kwakazivikanwa nevakawanda uye kwakashingisa vatsva vakawanda kuti vatange kupinda misangano. Mambo wacho akazochinja mwoyo akatanga kufarira chokwadi. Pakaitwa gungano redunhu munharaunda yake, akaita kuti vashanyi vawane pekugara uye akatopa mombe yakakura.
Vamwe vatungamiriri vePoro vakaedza imwe nzira yekurwisa—‘kuronga kuti pave nedambudziko vachishandisa mutemo.’ (Pis. 94:20) Vezvematongerwo enyika vePoro vakaendesa chikumbiro kuParamende chekurambidza basa reZvapupu zvaJehovha. “Asi mambo wacho akatidzivirira, achiudza dare racho kuti ainge ava nemakore maviri achidzidza nesu,” anodaro Charles Chappell. “Akati sangano redu raisatomboita zvematongerwo enyika zvachose uye kuti raidzidzisa vanhu uye kuvaita kuti vave neunhu. Akabva ataura kuti aitarisira kuti rimwe zuva aizovawo musangano racho. Imwe nhengo yedare reParamende yakanga yambodzidzawo Bhaibheri payakamutsigira, chikumbiro chacho chakabva charambwa.”
Vaimutsvinyira vachiti, “Mwari ngaakupe zvokudya!”
Vaya vakasiya mapoka epachivande vakapikiswa zvikuru nehama dzavo. Jonathan Sellu, mukomana anobva kuKoindu, aiva nemadzitateguru aiita zveun’anga. Ainge achidzidziswa kuzoitawo basa iroro. Paakatanga kudzidza Bhaibheri, akarega zvechidhimoni uye zvekupira midzimu. Vemumhuri make vakamupikisa zvikuru, vachimusiyisa chikoro uye kumunyima zvokudya paaienda kumisangano yechiKristu. Vaimutsvinyira vachiti, “Mwari ngaakupe zvokudya!” Asi Jonathan akaramba akatsunga. Haana kumboshayiwa zvokudya. Akadzidza kuverenga nokunyora, uye akazova piyona wenguva dzose. Jonathan akafara kuona amai vake vachigamuchira chokwadi.
Kuwedzera Mune Dzimwe Nzvimbo Dzenyika Yacho
Muna 1960, ungano uye mapoka asati ava ungano zvaiwanika muBo, Freetown, Kissy, Koindu, Lunsar, Magburaka, Makeni, Moyamba, Port Loko, Waterloo, uye kunzvimbo dziri kure kuchamhembe kwakadai sokuKabala. Gore iroro nhamba yevaparidzi yakawedzera zvikuru kubva pa182 kusvika ku282. Mapiyona chaiwo akawanda aibva kuGhana neNigeria akauya kuzosimbisa ungano dzacho dzairamba dzichikura.
Vakawanda vevatsva vacho vaibva mumapoka maviri: VaKrio, avo vaigara muFreetown uye munzvimbo dzakapoteredza, uye vaKisi, avo vaigara kuEastern Province. Asi mashoko akanaka zvaakaramba achipararira, mamwe madzinza akatangawo kuagamuchira. Aya aisanganisira vaKuranko, vaLimba, nevaTemne vaiva kuchamhembe; vaMende vaiva kumaodzanyemba; uye mamwe madzinza.
Muna 1961, Ungano yeFreetown East yakatsaurira Imba yayo yoUmambo. Ungano yeKoindu yakabva yatsaurira Imba yoUmambo inokwana vanhu 300 yakavakwa nezvidhinha yaishandiswawo seImba Yemagungano. Nguva pfupi izvi zvaitika, vakuru 40 vakapinda Chikoro Choushumiri hwoUmambo—chokutanga muSierra Leone. Chimwe chinhu chakaitika mugore iroro rinokosha chaiva chokuti hama dzakaita mushandirapamwe wakabudirira wokugovera Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene kune voruzhinji.
Chikoro Choushumiri hwoUmambo chakaitwa muSierra Leone muna 1961. William Nushy (Mutsetse wokumashure, nechepakati), Charles Chappell (mutsetse wepakati, wechipiri kubva kurudyi), naReva Chappell (mutsetse wepamberi, wechitatu kubva kurudyi)
Zviri pachena kuti Jehovha akanga achikomborera vanhu vake. Musi wa28 July 1962, International Bible Students Association, sangano repamutemo raishandiswa neZvapupu zvaJehovha munyika dzakawanda, rakanyoreswa zviri pamutemo kuhurumende yeSierra Leone.
Mikana Yokuparidza Inomuka muGuinea
Iye zvino ngatimboisa pfungwa dzedu kuGuinea (yaimbonzi French Guinea) yakavakidzana neSierra Leone. Gore ra1958 risati rasvika, hama shomanana dzakanga dzamboparidzira vamwe padzaipfuura nomunyika yacho, asi vanhu vehurumende yokuFrance avo vaitonga munyika yacho vaipikisa basa redu. Zvisinei, muna 1958, mukana wakamuka Guinea payakaramba kutongwa neFrance ichibva yava nyika inozvitonga.
Pave paya gore iroro, Manuel Diogo, hama yaitaura chiFrench yokuDahomey (iye zvino yava Benin) uyo aiva nemakore ari pakati pe31 ne33, akatanga kushanda pane mumwe mugodhi unocherwa aruminiyamu muFria, dhorobha riri makiromita anenge 80 kuchamhembe kweguta guru, Conakry. Aine chido chaizvo chokuparidza mundima iyi yainge isina kumboshandwa, Manuel akanyorera bazi rekuFrance achikumbira mabhuku uye kubatsirwa nemapiyona chaiwo. Akagumisa tsamba yake achiti: “Ndinotarisira kuti Jehovha achakomborera basa racho nokuti kuno kune vanhu vakawanda vanofarira.”
Bazi reFrance rakanyorera Manuel tsamba inokurudzira richimukumbira kuti agare muGuinea kwenguva refu sezvaaigona. Bazi racho rakarongawo kuti piyona chaiye amushanyire kuti amudzidzise ushumiri. Manuel akafarira kukurudzirwa kwaakaitwa uye akashingaira kuparidza muFria kusvikira paakafa muna 1968.
Mutariri anoshanyira mapazi Wilfred Gooch paakashanya kuConakry muna 1960, akawana dzimwe hama mbiri dzemuAfrica dzichiparidza ikoko. Hama Gooch vakasarudza kuti Guinea itarisirwe nebazi reSierra Leone panzvimbo pokutarisirwa nehofisi yebazi yokuFrance. Izvi zvakazotanga kushanda musi wa1 March 1961. Papera mwedzi mumwe chete, ungano yokutanga muGuinea yakaumbwa muConakry.
Chiedza Chezvokunamata Chinopinda Mumasango Anogara Achinaya
Mashoko akanaka aipararirawo kumaodzanyemba kweGuinea. Falla Gbondo, murume wechiKisi aigara kuLiberia, akadzokera kumusha kwake kuFodédou, anenge makiromita 13 kumavirira kweGuékédou. Akaenda nebhuku rinonzi Kubva ku Paradiso Yakarasika ku Paradiso Ichawanika Zve. Falla ainge asingagoni kuverenga, asi aikwanisa kutsanangurira vamwe vedzinza rake mifananidzo iri mubhuku racho. Akati, “Bhuku racho raiita kuti pave nezvakawanda zvokukurukura. Vanhu vairiti bhuku raAdhamu naEvha.”
Falla akadzokera kuLiberia. Akabhabhatidzwa uye akazova piyona chaiye. Kaviri pamwedzi, aidzokera kuFodédou kunodzidza neboka revanhu vanenge 30. Pasina nguva Borbor Seysey, mumwe piyona chaiye wechiKisi aibva kuLiberia akabatana naye. Vakatanga rimwe boka muGuékédou. Mapoka acho ari maviri akazova ungano.
Sezvo vaKisi vakawanda vakaramba vachiva Zvapupu, madzishe ekwavaigara akacherechedza zvakanaka zvavaiita. Zvapupu zvacho zvaishanda nesimba, zvainge zvakatendeka, uye zvaiita kuti kwazvaigara vanhu vave nerugare. Nokudaro, hama padzakakumbira kuvaka Imba yoUmambo muFodédou, madzishe acho akabva angovapa nzvimbo yakakura maeka masere. Imba yoUmambo iyoyo—yokutanga muGuinea—yakapera kuvakwa pakutanga kwa1964.
Panguva iyi matambudziko akanga ava kutotanga muConakry. Kusagadzikana kwezvematongerwo enyika kwakaita kuti vakuru vakuru vehurumende vanyumwire vanhu vekune dzimwe nyika. Mamishinari mana akabva kuGiriyedhi akanyimwa mavhiza ekugara zvachose muGuinea uye akabudiswa munyika yacho. Hama mbiri dzekuGhana dzakasungwa dzichipomerwa zvenhema ndokugara mujeri kweinenge mwedzi miviri.
Padzakasunungurwa, imwe yehama dzacho, Emmanuel Awusu-Ansah, akabva angosungwazve ndokuiswa munzvimbo yakashata zvikuru. Ari muimba yemujeri yaiva netsvina isingaiti, akanyora kuti: “Ndine utano hwakanaka mune zvokunamata, asi ndinogara ndiine fivha. Kunyange zvakadaro ndichiri kugona kuparidza. Mwedzi wadarika ndakaita maawa 67 mubasa remumunda, uye vadzidzi veBhaibheri vaviri vakatanga kuparidza neni.” Mumwe wevadzidzi vake veBhaibheri akauya muchokwadi. Papera mwedzi mishanu, Hama Awusu-Ansah vakasunungurwa ndokudzorerwa kuSierra Leone. MuConakry makangosara muparidzi mumwe chete.
Muna 1969, zvematongerwo enyika pazvainge zvati dzikamei, mapiyona chaiwo maviri akasvika muConakry. Vabvumirwa nezviremera, vakavaka Imba yoUmambo ine chiratidzo. Pasina nguva vanhu vanenge 30 vanofarira vainge vava kupinda misangano nguva dzose.
Nemhaka yekutyira kusungwa, pakutanga hama dzaiparidza dzakangwarira. Asi padzakanga dzava nechivimbo dzakawedzera basa radzo. Muna 1973, ungano diki iyoyo yakagovera maturakiti 6 000. Pave paya, vaparidzi vacho vakatanga kugovera magazini mumahofisi nenzvimbo dzemabhizimisi. Zvishoma nezvishoma, vakuru vakuru vehurumende nevanhuwo zvavo vakatanga kunzwisisa uye kukoshesa basa redu. Musi wa15 December 1993, kushinga ikoko kwakaita kuti Christian Association of Jehovah’s Witnesses of Guinea inyoreswe zviri pamutemo.
Sierra Leone neGuinea: 1945-1990 “Kuita Kuti Vazhinji Vave Vakarurama”—Dhan. 12:3. (Chikamu 3)
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra2014